Ted Bundy no anarany - iHorror
Home Subgenres mahatsiravinaTena heloka heloka Ted Bundy no anarany
Ted Bundy no anarany
by Piper St. James Janoary 31, 2020
nosoratan'i Piper St. James Janoary 31, 2020
Androany i Amazon dia namoaka ny lahatsoratr'izy ireo Ted Bundy: Falling For a Killer. Na dia nipoitra indray aza i Bundy teo imasom-bahoaka nandritra ny roa taona lasa, ity andiany ity dia nisafidy ny hifantoka amin'ny solomaso vaovao. Ankehitriny dia miteny ny vehivavy tratry ny mpamono olona.
Naharitra maro tamin'ireo taona vehivavy ireo, na dia am-polony taona maro aza vao nandroso tamin'ny zavatra niainany. Miady hevitra izy ireo fa tsy jerena ny tantaran'ilay "maherifo" amin'ny fitantarana ny tantaran'izy ireo; leo an'i Ted Bundy omem-boninahitra ry zareo.
Tsy maro tamin'ireo niharan'i Bundy no afa-nandositra, fa raha tsy teo izy ireo dia niresaka ho azy ireo ny fianakaviany sy ny namany, sambany ny maro. Ireo tahirin-kevitra dia manazava ireo vehivavy ireo amin'ny fomba izay tsy ananan'ny fanadihadiana, lahatsoratra ary boky taloha. Tsy anarana na sary fotsiny izy ireo. Zanakavavy, rahavavy, namana, mpiara-mianatra izy ireo. Nomena feo ireo vehivavy ireo tao anatin'ny efa-polo taona mahery.
Ny taona 1970 ho an'ny vehivavy
Notsiahivin'ireo antontan-taratasy fa ny voalohan'ny taona 1970 dia vovoka famelana ny firaisana ara-nofo ary fanovana revolisionera ho an'ny vehivavy. Ny vehivavy dia nitaky fitoviana fahitana tombony ary hifehezana ny vatany, ny lahy sy ny vavy ary ny fiterahana. Tsy naniry intsony ny hiorina amin'ilay hevitra hoe hita ho toy ny firaisana ara-nofo izy ireo; ary nampahatezitra lehilahy maro izany.
Tsy io ihany no hita teny amin'ny tobin'ny oniversite niaraka tamin'ny klioba vao natsangana, kilasy fampianarana vehivavy, ary famoriam-bahoaka, fa tamin'ny media ihany koa. Seho amin'ny fahitalavitra toa an'i Mary Tyler Moore sy That Girl naneho vehivavy mahaleo tena miaina fiainana mahaleo tena.
Elizabeth sy Molly Kendall
Ireo vehivavy roa izay manjaka amin'ny fitantarana amin'ny ampahany voalohany dia i Elizabeth "Liz" Kendall sy i Molly zanany vavy. Ilay reny sy ny zanany vavy dia nandany taona maro nanalavirana ny sirkus taorian'ny Ted Bundy, fa tsy mangina intsony.
Reny Liz Kendall sy ny zanany vavy Molly Kendall
Tsaroan'i Liz ny nihaonany voalohany tamin'ilay tovolahy nahafatifaty tamina klioba alina iray izay nangatahany taminy handihy. Taorian'ny resadresaka dia nangataka familiana mody avy any amin'ilay olon-tsy fantatra izy izay nilaza ny anarany dia Ted Nangataka taminy handany alina izy, fa tsy hanao firaisana. Natory teo am-pandriany izy roa alina, nitafy akanjo, teny ambonin'ireo lambam-pandriana.
Ny ampitso maraina dia gaga i Kendall fa taitra ary nahita fa nifoha maraina i Bundy, namoha ny zanany vavy avy teo am-pandriana tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ary tao an-dakozia izy nanao sakafo maraina. Ity no sary lavitra indrindra avy amin'ilay dragona mifandraika amin'ilay anarana. Nanomboka tamin'io andro io dia nipetraka tao amin'ny fianakavian'izy roa i Bundy.
Ny Kendalls sy Ted
Amin'ny ampahany iray amin'ireo tahirin-kevitra dia mamaritra ny fihaonany voalohany tamin'i Bundy izy roa. Izy ireo dia mandinika ny fiheverana voalohany, ny zavatra niainany, ary ny efa-taona voalohany niarahan'izy ireo. Nifindra tany Seattle i Liz ary nanantena ny hiasa ao amin'ny University of Washington. Te hanomboka fiainana vaovao ho an'ny tenany sy ny zanany vavy 3 taona izy miaraka amin'ny tanjona farany hihaona amin'i Andriamatoa Right. Tsy fantany fa izay nihaonany dia hisy hafa amin'izany.
Nandritra izay taona voalohany izay dia nitantara i Liz sy i Molly fa nifandray tamin'ny fianakavian'izy ireo ilay sipa manga ary ilay ray niteraka azy. Bundy dia nilalao niaraka tamin'i Molly sy ireo ankizy manodidina. Ny fianakaviana tsy manam-paharoa misy telo dia manasa ny rahalahin'i Bundy 12 taona amin'ny fitsangantsanganana.
Bundy sy ny Kendalls
Ny fizarana voalohany dia mirakitra an'ity sary ity miaraka amin'ny sary marobe mampiseho ny fotoana mahafaly, fahatsiarovana maro loko ary endrika mitsiky izay adinonao fa mijery fampisehoana momba mpamono olona maromaro ianao. Fahatakarana ny fiainan'i Bundy izay mifampitohitohy amin'ny ra sy ny vono olona izay malaza ratsy aminy izany.
Manomboka miova ny onja
Kendall dia nanintona ilay tanora Bundy ary nahatsapa fa nanana fifandraisana feno fitiavana izy. Saingy, rehefa nandeha ny taona, dia nanomboka nanjary miharihary ireo saina mena. Roa taona sy tapany teo ho eo ny fifandraisana, herintaona sy sasany teo ho eo talohan'ny namonoana olona voalohany dia nisy iray amin'ny saina voalohany. Nirehareha tamin'i Liz i Bundy satria nangalatra.
Zava-misy fanta-daza Bundy dia kleptomaniac. Betsaka ny zavatra manokana azon'i Bundy nandritra ny androm-piainany no nangalatra, ary nahafinaritra azy ny nitantara taminy ireo zava-bita ireo. Tsy mieboebo fotsiny, fa mirehareha tsy amin'ahiahy.
Tamin'io fotoana io dia niasa tamin'ny antoko Repoblikana ihany koa i Bundy. Ny iray amin'ireo asany dia ny mampanjifa ny mpanohitra amin'ny endrika hafa sy manangona vaovao. Hirehareha amin'ny tsy mitonona anarana izy ary tsy ho fantatra intsony. Tamin'io no nahatsapan'i Bundy ny lanjan'ilay «chameleon», izay nampiasainy taty aoriana nandritra ny androm-pamonoana olona.
Manomboka ny famonoana olona
Araka ny ankamaroan'ny kaonty, tamin'ny 4 Janoary 1974 i Bundy dia namono olona voalohany tao amin'ny Distrikan'ny Oniversite. Tsy nihaona tamin'i Bundy mihitsy i Karen Epley talohan'ny nidirany tao amin'ny efitranony ary nanafika azy tamin-kabibiana. Ny ratra nahazo azy dia nateraky ny vavony triatra, fahasimban'ny ati-doha, ary koa ny fahaverezan'ny fihainoana sy ny fahitana.
Ilay sisa velona Karen Epley
Raha nitantara ny zavatra niainany dia manazava i Epley fa sambany niresaka momba ny hetsika izy. Te hanana fiainana manokana izy ary te hiala amin'ny fiainana. Na izany aza, nanaiky ihany koa izy fa misy habakabaka hitazonana ny tsiambaratelon'ny mpanao ratsy sy ny heloka vitany. Io fahatsapana hoe "miaro ny mpanao ratsy" io dia mbola velona ankehitriny, ka izany no antony maro amin'ireo iharan'ny herisetra ara-nofo mbola tsy mandroso hitory heloka.
4 herinandro taty aoriana
Iray volana taty aoriana tamin'ny 31 Janoary dia namely indray i Bundy. Ity heloka bevava ity dia nitovy tamin'ny fanafihana an'i Epley, saingy tsy tafavoaka velona i Linda Healy. Ny kaontin'i Healy dia notantarain'ireo mpiray trano aminy sy ny fianakaviany izay nitondra ny feony sy ny tantarany.
Nipetraka tamina tranon-jazavavy i Healy rehefa novakiana ny efitranony ary nokapohina sy nalaina ankeriny avy tao amin'ny efitranony izy. Tsy voalaza mazava raha efa maty izy na tsia rehefa nesorina tamin'ny toeram-ponenany. Na izany aza, nohazavaina fa i Bundy dia nanamboatra ny fandriany mba handrakofana ny rà tamin'ny kidoro, nesoriny ny lamba fandriany feno rà mba hitehirizana ao anaty lalimoara, ary nampitafiny akanjo madio izy talohan'ny nitondrany azy tany an-trano.
Fiovana ao Bundy
Amin'izao fotoana izao dia hita tamin'i Kendall fa misy fiovana bebe kokoa mitranga ao Ted. Ny iray amin'ireo fahasamihafana tsikaritra kokoa dia ny fanjavonan'i Bundy andro maromaro. Izy ireo koa dia nanao ady am-bava bebe kokoa, izay nitanony ho tony hatrany.
Ny zanaka vavy Molly dia mahatsiaro ireo fotoana ireo ihany koa. Tsaroany ny tsy fahitany ny Bundy manodidina azy, ary koa ny hetsika tsy dia misy ifandraisany amin'ny fianakaviana eo amin'izy telo. Nandray an'io manokana i Liz ary nanomboka nisotro. Tsy fantany fa ny fiovan'ny toetrany, ny tsy fisian'ny vatany tamin'ny fiainany, ary ny fiovan'ny toetrany tsy misy dikany dia nifandray taminy. Io no fiandohan'ny vanim-potoana namonoana an'i Bundy.
BundyNianjera ho an'ny mpamono olonaKendallliz kendallmolly kendallserial killersMpamono SerialTed Bundy
Miaraka amin'ny fitiavana ny zava-mahatsiravina rehetra sy ny tena heloka bevava, dia hanoratra momba izany foana i Piper. Manampia filaharam-bolo, lamaody ary fomba fiainana hafa ary ianao no manana an'ity mpanoratra ity. Azonao atao ny mahita ny lahatsorany ao amin'ny iHorror.com momba ny horohoro sy ny faritra vaovao momba ny Heloka Bevava nofidina hitarika azy ,.
'Mortal Kombat: valifatin'ny maingoka' dia isaina isaina
'Toerana milamina Fizarana 2' Mitete eo alohan'ny Super Bowl ny fahitana fahitalavitra
Fijery: Joshua Jackson dia tsy milamina ao amin'ny New 'Dr ....
'Rodney & Sheryl': nilalao kintana i Anna Kendrick ...
Enga anie 28, 2021
Robert Hansen: mpivaro-kena, Baker
Ronald Defeo Jr., 'The Amityville Horror,' dia maty tao amin'ny ...
The Clown and the Candyman: tafatafa amin'ny tena ...
Richard Ramirez: ny Night Stalker sy ny satic panic ...
Janoary 20, 2021
Hitan'ireo lehilahy ireo ny nanjo an'i Monolith rehefa ...
Desambra 1, 2020
Ny tena loharano niavian'ny vanim-potoana "Hentitra ...
Novambra 29, 2020
Vehivavy UK no mahita «Kit mpamosavy mpamosavy» hafahafa ao ...
Novambra 20, 2020
Sarah Paulson mizara endrika vaovao manafintohina amin'ny 'Amerikanina ...